छोरा आर्यनलाई जे ल वा ट बा हि र ल्या उ न आमा गौरीले गरिन् यस्तो भा क ल, शाहरुखले भने ‘अब मेरो घरमा कोही नआउनु ? – Dainik Sangalo
छोरा आर्यनलाई जे ल वा ट बा हि र ल्या उ न आमा गौरीले गरिन् यस्तो भा क ल, शाहरुखले भने ‘अब मेरो घरमा कोही नआउनु ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ३०, २०७८ समय: १७:३०:१९
वास्तवमा, आर्यन खान ड्रस को मामला मा क्रूज पार्टी बाट प क्रा उ गरीएको थियो। यद्यपि आर्यनबाट ड्र ग लिएको भेटिएको भने थिएन । उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स म्ब न्ध भएको आ रो प लगाइएको छ । आर्यन खानलाई ज मा न त पा उ न गा ह्रो भइरहेको छ।
एनसीबी र आर्यन खानका वकिलबीच लामो बहस भयो। अक्टोबर १४ मा भएको सुनुवाई पछि अ दा ल त ले सु नु वा ई २० अक्टोबर सम्मका लागि स्थ गि त गरेको छ। लामो बि दा का का रण यस्तो भएको हो। शाहरुखका पारिवारिक साथीहरु बताउँछन् कि दुबै प्रत्येक दिन चि न्ति त हुन लागेका छन्।
साथीले भन्यो कि गौरी खानले आर्यन खानको लागी भा क ल मा गे की छिन्। यस संगै, उनी लगातार नवरात्री को अवसर मा प्रार्थना गरीरहेकी छिन्। उनीहरुले चाडपर्वको शुरुदेखि नै मिठाई र चिनी खाएका छैनन्। शाहरुख खानकी म्यानेजर पूजा ददलानीले पनि दुर्गाको फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छिन्।
यो उनले अक्टोबर १४ मा सु नु वा ई अघि सा र्व ज नि क गर्दै लेखिन् धन्यवाद माता रानी। यस अवसरमा शाहरुख खान र गौरी खानले सोचेका थिए कि आर्यन खान ज मा न त पाउनेछन् र उनी भोलिपल्ट जे ल बाट बा हि र आउनेछन्, तर यस्तो भएन। दुबै जना नि रा श भए।
Last Updated on: October 16th, 2021 at 5:30 pm